Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga xusay dalka Koofur Afrika+Sawirro | Baydhabo Online
Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga xusay dalka Koofur Afrika+Sawirro
Xaflad si quruxbadan loo soo agaasimay oo lagu maamusayay 43 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii la aas aasay Ururkii Dhalinyarada SYL ayaa lagu qabtay magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika.
Munaasabaddaas waxaa ka qeygalay Madaxda Safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Koofur Afrika, dhalinyarro Waxgarad iyo Ganacsato iyadoo ay Xafladan soo qabanqaabiyeen Ururka Dhalinyarada Soomaaliyeed ee Pretoria.
Intii ay Munaasabadda socotay ayaa waxaa hadallo ka jeediyay Waxgaradkii iyo dhalinyaradii ka qeybgalay iyo madaxda Safaaradda waxeyna u duceeyeen dhalinyaradii SYL ee usoo halgamay xuriyadda, iyadoo dhanka kale dhalinyarada maanta kula dardaarmay inay la yimaadaan fikir wanaagsan oo wax ka bedala xaaladda maanta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku suganyihiin.
Gudoomiyaha dhalinyarada Pretoria Xarbi Cabdi Xasan oo Munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay ka fikirayaann sidii ay u sameysan lahaayeen mustaqbal wanaagsan ayna nooleeyaan maalintan qiimaha badan ee 15 May.
U qeybsanaha Hiddaha iyo Tacliinta Safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika,Mudane Cabdi Xalane Xirsi oo ka hadlay madasha Xuska SYL ayaa Dhalinyarada ku boorriyay inay ka fogaadaan qabyaaladda, waxa uuna yiri.
”Dhalinyarada maanta waa inay ka fogaadaan Qaadka iyo Qabyaaladda waayo Qabyaaladda waa qurun sida uu Nabiga xadiith saxiix ah ku yiri”
Munaasabadaasi ayaa lagu soo bandhigay heeso Wadani ah oo aad u qiiro badnaa, iyadoo ugu dambeyntii ku idlaatay jawii wanaagsan.